ယောကျာ်းဖြစ်သူရဲ့ ပုခုံးလေးကိုမှီပြီး ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ကပ်ချွဲနေတဲ့ ရွှေမှုံရတီ – Suehninsi
အနုပညာပျိုးခင်းရဲ့ စင်တင်မင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ် ရွှေမှုံရတီကတော့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်ပေမယ့် အနုပညာအရည်အချင်း အပြည့်အဝရှိတဲ့ ရွှေမှုံရတီက အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ အောင်မြင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကမှ အဆိုတော်၊သရုပ်ဆောင်
ရွှေထူးနဲ့လက်ထပ်ပြီး အိမ်ထောင်သည်ဘဝကိုတည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ လက်ရှိမှာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်စီ အနုပညာအလုပ်တွေကို မနားတမ်းလုပ်ကိုင်နေရပေမယ့်လည်း
သူတို့စုံတွဲက အချစ်တွေပိုတိုးလို့နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အရမ်းကို Romantic ဆန်ဆန် ချစ်ကြတဲ့ ရွှေရွှေတို့စုံတွဲကိုတော့ ပရိသတ်တွေအားလုံးက အားကျနေရတာပါနော်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က နားလည်မှုတွေ ထားရှိပြီး လက်တွဲနေမို့ ရွှေထူးကလည်း ချစ်ဇနီး အပေါ်မှာ အမြဲ သည်းခံ ဂရုစိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့
ရွှေမှုံက ခင်ပွန်းသည် ရွှေထူးရဲ့ ပခုံးလေးကို မှီကာ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို အသည်းယားစရာကောင်းလောက်အောင် ချွဲနွဲ့နေတဲ့ ပုံလေးတွေကို သူရဲ့ mydayမှာ တင်ပေးလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည်ဆီက ဂရုစိုက်မှုကို အပြည့်အဝရရှိနေတဲ့ ရွှေမှုံရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ။
အနုပညာပြိုးခငျးရဲ့ စငျတငျမငျးသမီးတဈလကျအဖွဈ ရှမှေုံရတီကတော့ အနုပညာလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျလာခဲ့သူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အသကျအရှယျငယျရှယျပမေယျ့ အနုပညာအရညျအခငျြး အပွညျ့အဝရှိတဲ့ ရှမှေုံရတီက အခြိနျခဏလေးအတှငျးမှာ အောငျမွငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ရှမှေုံရတီက လှနျခဲ့တဲ့ နှဈအနညျးငယျလောကျကမှ အဆိုတျော၊သရုပျဆောငျ
ရှထေူးနဲ့လကျထပျပွီး အိမျထောငျသညျဘဝကိုတညျဆောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူမတို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ လကျရှိမှာ အေးခမျြးသာယာတဲ့ အိမျထောငျသညျဘဝလေးကို ပိုငျဆိုငျထားရပွီ ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျကပြွီးနောကျပိုငျးမှာ ကိုယျစီ အနုပညာအလုပျတှကေို မနားတမျးလုပျကိုငျနရေပမေယျ့လညျး
သူတို့စုံတှဲက အခဈြတှပေိုတိုးလို့နတော တှရေ့ပါတယျ။ အရမျးကို Romantic ဆနျဆနျ ခဈြကွတဲ့ ရှရှေတေို့စုံတှဲကိုတော့ ပရိသတျတှအေားလုံးက အားကနြရေတာပါနျော။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျက နားလညျမှုတှေ ထားရှိပွီး လကျတှဲနမေို့ ရှထေူးကလညျး ခဈြဇနီး အပျေါမှာ အမွဲ သညျးခံ ဂရုစိုကျတာကို တှရေ့ပါတယျ။ ယနမှေ့ာတော့
ရှမှေုံက ခငျပှနျးသညျ ရှထေူးရဲ့ ပခုံးလေးကို မှီကာ ကလေးလေးတဈယောကျလို အသညျးယားစရာကောငျးလောကျအောငျ ခြှဲနှဲ့နတေဲ့ ပုံလေးတှကေို သူရဲ့ mydayမှာ တငျပေးလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခငျပှနျးသညျဆီက ဂရုစိုကျမှုကို အပွညျ့အဝရရှိနတေဲ့ ရှမှေုံရဲ့ ပုံလေးတှကေို ပွနျလညျတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော…. ။